Magaalada Tucson & Degmada Pima waxay Raadinaysaa Soo -galinta Bulshada ee Isticmaalka Lacagaha HOME -ARP ee Degmada Tucson/Pima - Tucson Pima Wadashaqayn lagu joojinayo Hoylaawe
Magaalada Tucson & Degmada Pima waxay Raadinaysaa Soo-galinta Bulshada ee Isticmaalka Lacagaha HOME-ARP ee Degmada Tucson/Pima
by	Jason Thorpe	/ Isniintii, 18 Oktoobar 2021	/ Published in Community, Featured, Hada Farxad
Ku soo biir Magaalada Tucson iyo Degmada Pima ee Kulanka Soo-gelinta Beesha HOME-ARP
Magaalada Tucson iyo Degmada Pima waxay raadinayaan talooyinka bulshada si ay uga wada hadlaan adeegsiga mudnaanta leh ee $ 12,770,187 ee Barnaamijka Iskaashiga Maalgashiga HUD HOME-Lacagta Qorshaha Samatabbixinta Ameerika (HOME-ARP). Lacagta HOME-ARP waxay ku xaddidan tahay taageeridda guryeynta, hoyga iyo adeegyada shakhsiyaadka iyo qoysaska la kulma ama halis ugu jira hoy la 'aan, qaxaya ama isku dayaya inay ka baxsadaan xadgudubka guriga, faraxumaynta galmada, dabagalka ama tahriibinta dadka, ama dakhligoodu aad u hooseeyo oo aad u daran kharashka guryaha oo culeyskiisu sareeyo.
The Waaxda Guryeynta iyo Horumarinta Bulshada ee Magaalada Tucson iyo Waaxda Horumarinta Bulshada iyo Shaqaalaha ee Degmada Pima waxay martigelin doontaa laba gole oo talo -bixin beesha ah xubnaha TPCH iyo daneeyayaasha kale ee bulshada.
Bixiyeyaasha adeegga xadgudubka hoylaawe iyo guriga, kooxaha ruug -caddaaga ah, hay'adaha kale ee dawliga ah ee wax ka qabta baahiyaha shakhsiyaadka iyo qoysaska aan ammaanka lahayn, iyo ururada wax ka qabta guryaha xaqa ah, xuquuqda madaniga, iyo baahiyaha dadka naafada ah ayaa lagu dhiirrigelinayaa inay ka soo qaybgalaan mid ka mid ah fadhiyada . Diiwaangelin hore ayaa loo baahan yahay oo fadhiyada waa la duubi doonaa.
Kalfadhi kastaa wuxuu ku kooban yahay 60 qof oo ka soo qaybgalay. Si loo oggolaado ka -qaybgalka ugu badan ee bulshada, xubnaha bulshadu waxay imaan karaan hal kulan oo keliya.
Kulanka Soo-gelinta Bulshada #1-Noofambar 1, 2 galabnimo-3 galabnimo
Guji halkan si aad hadda isu diiwaangeliso
Kulanka Soo-gelinta Bulshada #2-Noofambar 3, 10 am-11am